Niala tamin’ny fivavahana amin’i Bouddha (1)
"Izahao, Jehovah ô, fa azom-pahoriana aho… Miontana ato anatiko ny foko." Fitomaniana 1:20
"Nanakaiky Ianao tamin’ny andro niantsoako Anao, ka dia hoy Ianao : Aza matahotra." Fitomaniana 3:57
“Ny antony nanarahako io antokom-pivavahana io, dia fankatoavana fa tsy faheresen-dahatra. Tamin’ny volana aogositra 1994, izaho sy ny reniko dia nanatrika fotoam-pivavahana “bouddhiste” tany Paris. Toa falifaly ery ny olona niara-nivavaka tamin’izany, fa izaho kosa sorena. Nony tonga ny fotoana tokony hanipazana felam-boninkazo ho an’i Bouddha, dia nanontany ny reniko aho hoe: “Nahoana moa aho no tsy maintsy manao izany, kanefa tsy mino akory?” Nasainy nangina aho. Nanomboka teo no nanalavirako tanteraka ny fivavahana amin’i Bouddha.
Rehefa ho 16 taona aho, ny hany hitako ... sy niainako dia tsy fankatoavana, eritreritra ratsy, fikomiana, lainga, fitondrantena maloto. Arakaraka ny nandrosoako tamin’izany lalana izany no nampijaly ahy.
Indray andro, raha niverina nody avy tany an-tsekoly aho, dia nihidy tao an’efitranoko, ary niandrandra ny lanitra sady niantso hoe: “Andriamanitra ô, raha misy Ianao, dia ampio aho hiala amin’ity helo ity! Miangavy Anao aho, vonjeo, fa Ianao no hany sisa antenaiko!” Tamin’ny volana Jona 1996 aho dia nifanena tamina kristiana iray, nanasa ahy hiaraka amina tanora mivory mba hamaky Baiboly. Nankany aho, ka tamin’izany dia nisy hira iray nanohina ahy fatratra:
Fantatr’Andriamanitra tsara izay toa mavesatra aminao,
Izay mampahory anao, manakorontana anao isanandro.
Fantany ny alahelonao sy ny fahatahoranao ny ampitso,
Fa mba fantatrao ve fa hizotra tsara ny zavatra rehetra, miaraka amin’Ilay Andriamanitro?
Nitomany aho, tahaka ny hoe niteny tamiko tao am-poko lalina tao Andriamanitra ary nitaona ahy hanatona Azy.”